Dalbashada waxbarashada - InfoFinland
Nolosha Finland > Waxbarashada > Dalbashada waxbarashada
Waxbarashada heerka labaad iyo dugsiyada tacliinta sare ee Finland waxaa loo qaban-qaabiyaa codsi u gaar ah oo wadajir ah. Waxaa kale oo intaas dheer in waxbarashooyinka qaarkood aad si joogto ah u codsan karto sannadka oo dhan ama codsiga waxbarashooyinkaas u gaarka ah. Wakhti hore ka salgaar wakhtiyada codsiga iyo sida loo codsado waxbarashada aad adigu xiisaynayso.
Fayruska Korona iyo dalbashada waxbarashada
Xaaladda fayruska Korona waxay saameyn ku yeelan kartaa imtixaanka gelitaanka iyo imitixaanka ku habboonaanta. Goobaha waxbarashada ayaa soo sheegayaa isbeddellada imaan kara ka hor inta aanu wakhtiga codsigu billaaban. Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogagga goobaha waxbarashada ama adeegga Opintopolku.fi.
Fayruska Korona iyo dalbashada waxbarashadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Dalbashada dugsiga sare
Waad dalban kartaa heerka labaad ee dugsiga sare waqtiga la dalbado iskuullada Febaraayo–Maarso. Waad codsan kartaa dugsiga sare, haddii aad soo dhameysey dugsiga hoose maadooyinkiisa ama xiisadahiisa, taasoo oo u dhiganta waxbarashada aasaasiga ah. Buuxi codsiga ku jira adeegga Opintopolu.fi.
Waxaa kale oo aad dugsiga sare dalban kartaa, haddii aad dibadda ku soo dhammaysay waxbarasho u dhigantay waxbarashada dugsiga hoose-dhexe ee Finland. Markaas waxaa dugsiga sare laguugu qaadan karaa qaab ka fiirsasho ku salaysan. Waxaa markaas xisaabta lagu darsanayaa:
qiimeynta ku saabsan sida aad waxbarashada uga soo baxday.
Dugsiyada sare waxay inta badan ardayda ku qaataan qaab ku salaysan shahaadadaada dhammaynta waxbarashada dugsiga hoose-dhexe. Waxaa kale oo ay dugsiyada sare xisaabta ku daran karaan waxbarashada kale iyo hiwaayadaha ardayga. Dugsiyada qaarkood waxay qaadaan imtixaanka gelitaanka, kaas oo ay dhibcaha qaar ka imaanayaa.
Codsashada waxbarashada dugsiga sareFinnish | Iswidish | Ingiriis
Sababaha xulashada dugsiga sareFinnish | Iswidish | Ingiriis
Dalbashada dugsiga sare ee joogtada ah
Haddii codsiga wadajirka ah ee dugsiga kaddib ay soo haraan boosas waxbarasho oo bannaan, wuxuu dugsiga sare boosaskaas ku buuxin karaa codsi joogta ah. Dugsiyada sare ayaa go’aan ka gaaraya wakhtiyada codsigooda. Ku codso dugsiga sare codsiga joogta ah adigoo isticmaalaya adeegga Opintopolku.fi ama bogagga shabaakadda ee dugsiga sare. Shuruudaha gelitaanka ee codsiga joogtada ah waa kuwa inta badan la mid ah kuwa ku jira codsiga wadajir ah.
Dalbashada dugsiga sare ee dadka waaweyn
Haddii aad doonayso in aad gasho dugsiga sare ee dadka waaweyn, toos ula xiriir goobta waxbarashada. Kuma codsan kartid dugsiga sare ee dadka waaweyn codsiga wadajirka ah. Marka aad codsanayso dugsiga sare ee dadka waaweyn, celceliska dhibcaha shahaadadu wax muhiim ah ma ahan. Dugsiga sare ee dadka waaweyn waxaad billaabi kartaa xilli-dugsiyeedka oo dhexda socda, laakiin inta badan waxay wabarashadoodu billowdaan billowga xilli-dugsiyeedka gu’ga ama dayrta. Waxbarashooyinka waxaad ka heleysaa Opintopolku.fi.
Macluumaadka dugsiyada sare ee dadka waa weynFinnish | Iswidish
Haddii aad doonayso in sare u qaaddo aqoontaada afka Finnishka ka hor inta aadan codsan dugsiga sare, waxaad codsan kartaa waxbarashada u diyaarinta dugsiga sare, yacni waxbarashada LUVA. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Dugsiga sare.
Waxbarashada xirfadeed waxaa sannadka oo dhan lagu codsan karaa codsiga joogtada ah ama codsiga wadajir ah ee heerka labaad. Codsiga wadajirka ah wuxuu inta badan dhacaa Febraayo-Maarso. Codsiga wadajirka ah waxaa ugu horreyn loogu talaggalay dadka ka soo qalinjebiyay dugsiga hoose-dhexe. Buuxi codsiga ku jira adeegga Opintopolu.fi.
Waxbarashadu waxay ku xiran yahay, habka iyo sababta ardeyda lagu dooranayo. Badi waxaa lagu doortaa dhibcaha ay heleen, taasoo ku xiran shahaadaada dhibcaha ku yaala. Iskuullada badankood waxay qaadaan imtixaan ama imtixaan kale oo ah inuu qofku u qalmo. Laamaha waxbarashada qaarkood waxay leeyihiin shuruudo caafimaadka la xiriira.
Goobta waxbarashadu waxay hubin kartaa in aqoontaada luqadeed ay ku filan tahay waxbarashooyinka. Warar dheeraad ah weydii goobta waxbarashada, marka aad codsaneyso.
Haddaad u baahan tahay kaalmo qaas ah oo adag in laguugu siiyo waxbarashada dugsiga xirfadda naafonimo ama adkaansho dhanka waxbarashada ah dartood, waxaad dugsiga ku codsan kartaa codsiga waxbarashada taageerada gaarka ah u baahan.
Siyaabaha lagu doorto iskuulada farsamadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Codsiga sii socda ee waxbarashada xirfadda
Haddii aad dhammaysay waxbarasho xirfadeed ama shahaadada tacliinta sare, codsiga wadajirka ah kuma codsan kartid waxbarasho xirfadeed. Ku codso waxbarashada codsiga joogtada ah, xittaa haddii aad shaqaynayso ama aad doonayso in aan laanta shaqada iska beddesho, ama haddii aad doonayso in aad codsato waxbarashada heshiiska shaqadu la socdo. Waxaa kale oo aad codsiga joogta ah ku codsan kartaa waxbarashada, haddii aadan codsiga wadajirka ah ku helin boos waxbarasho.
Dugsiyada waxbarashada ayaa go’aan ka gaaraya wakhtiyada codsiga ee codsiga joogtada ah iyo sida codsiga loo hirgelinayo. Macluumaadka ku saabsan wakhtiyada codsiga iyo tilmaan-bixinnada codsiga waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda dugsiyada ama adeegga Opintopolku.fi.
Haddii aad doonayso in aad hesho macluumaad iyo aqoon ka hor inta aadan codsan dugsiga xirfadda, waxaad codsan kartaa waxbarashada u diyaargarowga iskuulka xirfadda, yacni waxbarashada VALMA. Waxbarashada VALMA waxaad sidoo kale sare ugu qaadi kartaa aqoontaada afka Finnishka. Faahfaahin dheeraad ah ka qri bogga InfoFinland Waxbarasho xirfadeed.
Haddii aad haysato shahaado dibadda ah
Haddii dibadda ku soo dhammaysay dugsi hoose-dhexe ama dugsi sare, waxaa qaab ka fiirsasho ah laguugu xulan karaa dugsiga xirfadda. Markaas waxaa xisaabta lagu daranayaa:
Codsashada waxbarashada xirfadeed ee dadka waaweyn
Adigoo qof weyn ah waad codsan kartaa waxbarasho xirfadeedka, haddii aad doonayso in adigoo shaqaynaya aad waxbarato. Waxbarashadaadi iyo aqoontaadi hore ayaa lagu xisaabtamayaa marka aad waxbarashada ku jirto iyo marka aad shahaadada qaadanayso.
Adigoo qof weyn ah waxbarashada kuma codsan kartid codsiga wadajirka ah. Ku codso waxbarashada codsiga joogtada ah. Macluumaadka ku saabsan wakhtiyada codsiga iyo tilmaan-bixinnada codsiga waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda dugsiyada ama adeegga Opintopolku.fi
Codsiga waxbarasho xirfadeedka sare
Waad codsan kartaa waxbarasho xirfadeedka sare, si aad u qaadato waxbarasho xirfadeedka tacliinta sare, haddii aad ka soo baxaday mid ka mid ah kuwaan:
cadadda waxbarashada dugsiga sare
shahaadada dugsiga sare
shahaadada tacliinta sare ee koowaad ama labaad
shahaado dibadeed, taas oo lagu helo fursad lagu galo waxbarashada dugsiyada tacliinta sare ee wadanka aad shahaadadaas ka soo qaadatay
Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa adeegga Opintopolku.fi.
Codso waxbarasho xirfadeedka sare xiliga codsiga wadajir ah. Xilliga codsiga wadajirka ah waa saddex jeer sannadkii, gu'ga oo labo jeer ah iyo halmar oo deryta ah. Waxbarashooyinka codsiga ku jira waa kuwa isbedbeddela wakhtiyada kala duwan. Waxbarashooyinka lala kala dooran ee xilliga gu’ga ayaa ah kuwa ka badan kuwa deyrta. Buuxi codsiga ku jira adeegga Opintopolu.fi
Janaayo ayaa la qabanqaabiya codsiga wadajirka ah ee waxbarashada ku baxaysa afafka qalaad. Waxbarashooyinka ku baxa afafka qalaad waa kuwa ku baxa wixi aanan ahayn afka Finnishka ama Isiwiidhishka. Dugsiyada tacliinta sare waxay sidoo kale qabanqaabin karaa codsiyo gaar ah oo loogu talaggalay waxbarashooyinka afafka qalaad ku baxa. Macluumaa dheeraad ah waxaad ka heleysaa adeegga Opintopolku.fi.
Inta badan waxaa xulashada ardayda ee dugsi xirfadeedyada tacliinta sare ama jaamacadda lagu saleeyaa dhibcaha shahaadada dhammaynta dugsiga sare ama shahaadada xirfadda ee aasaasiga ah. Ardayda inteeda kale waxaa lagu xushaa imtixaanka xulashada ee AMK. Haddii laguugu xushay shahaadada aad haysato darteed, uma baahnid inaad gasho imtixaanka xulashada ee AMK. Waxaa kale oo xulashadaada lagu salayn karaa waxbarashada aad ku qaadatay dugsi xirfadeedka tacliinta sare ee furan.
Haddii aadan haysan shahaadada waxbarashada heerka labaad ama aan laguugu xulan shahaadada aad haysato darteed, waa in aad gashaa imtixaanka xulashada ee AMK. Iska diiwaangeli imtixaanka xulashada xilliga codsiga adigoo isticmaalaya adeegga Opintopolku.fi. Imtixaanka waxaa lagu sameeyaa kambuyuutar, sidaas darteed, waxaad u baahan tahay kambuyuurta la qaato. Uma baahnid in aad imtixaanka u sii diyaargarowdo.
Waxaa waxbarashada intooda badan loo isticmaalaa imtixaanka xulashada ee AMK. Waxbarashooyinka qaarkood waxay leeyihiin imtixaanka xulashada oo gaar ah ama laylisyo la sii samaynayo. Kuwaani waa tusaale ahaan laamaha waxbarashada dhaqanka. Ka ogow bogagga shabakadda dugsiyada ama adeegga Opintopolku.fi, sida ardayda loo xulanayo.
Codsiga waxbarashada AMKFinnish | Iswidish | Ingiriis
Takhasuska waxbarasho xirfadeedka sare
Takhasus waxbarasho xirfadeedka sare (ylempi AMK-tutkinto) waad codsan kartaa, markii aad heysato
mid u qalanta waxbarasho xirfadeedka sare ama shahaado tacliin sare iyo
ugu yaraan labo sano khibrad shaqo xirfada aad soo baratey ah, haddii aad khibradaas shaqo aad heshey, kadib markaad waxbarashada soo dhameysatey.
Ku codso takhasuska waxbarasho xirfadeedka sare (ylempi AMK-tutkinto) codsiga wadajirka ah ee gu’ga ama deyrta. Waxaa waxbarashooyin badan la codsan karaa gu’ga oo kaliya. Ka buuxso foomka codsiga adeegga Opintopolku.fi.
Takhasuska waxbarasho xirfadeedka sare (ylempi AMK-tutkinto) waxaad ku codsan kartaa codsiga wadajir ah ee dugsiyada tacliinta sare ama codsiga gaarka ah. Foomka codsiga waxaad ka heleysaa, markii aad iskuulka ka raadisid Opintopolku.fi.
Digrii tacliin sare (AMK)Finnish | Iswidish | Ingiriis
Waad codsan kartaa jaamacadda, haddii aad qaadatay tusaale ahaan shahaadooyinkan mid ka mid ah:
shahaado dugsi sare
Codso jaamacada xiliga dalbashada tacliinta sare ama ku codso codsiyada khaaska ee jaamacadda oo aad gooni u dalbaneyso.
Waxbarasho jaamacadeedyo badan ayaad waxaad ku codsan kartaa codsiga wadajir ah ee dugsiyada tacliinta sare. Waa xilliga gu’ga iyo deyrta. Waxyaabo badan la kala dooran ayaa gu’ga la helaa. Waxbarashooyinka qaarkood sida waxbarashooyinka afafka qalaad ku baxa, codsigooda wadajirku waa Janaayo. Wakhti hore soo ogow, wakhtiga aad codsan karto waxbarashada aad xiisaynayso. Buuxi codsiga ku jira adeegga Opintopolu.fi.
Inta badan waxaa xulashada ardayda ee jaamacadda lagu saleeyaa dhibcaha shahaadada dhammaynta dugsiga sare. Ardayda inteeda kale waxaa lagu xushaa imtixaanka xulashada ama hab xulasho oo kale. Waxaa laguu eegi karaa tusaale ahaan, waxbarashooyinka aad ku qaadatay dugsiga tacliinta sare. Haddii aadan haysan shahaadada dhammaynta dugsiga sare, waxaa laguugu xulan karaa imtixaanka xulashada. Waxaa wanaagsan in imtixaanka xulashada si fiican loogu diyaargaroobo. Waxbarashooyinka qaarkood waxaa loo qaataa qayb yar oo codsadayaasha ka mid ah. Imtixaannada qaarkood waxaa ku jira laylisyo la sii samaynayo.
Codsashada waxbarashada jaamacadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Marka ugu horreysa ee aad dugsiga tacliinta sare codsanayso
Dugsiyada xirfadeed ee tacliinta iyo jaamacadaha qaarkood waxay qayb kamid ah boosaska waxbarashada ee codsiga wadajirka ah u qabtaan dadka marka ugu horreysa codsanaya dugsiyada tacliinta sare cadadda go’an ee dadka cusub (ensikertalaiskiintiö) Baaxadda tirada cayiman ay ku kala duwan tahay goobaha codsiyada. Waxaad marka ugu horreysay codsanaysaa, haddii
aadan Finland ku dhammaynin waxbarashada tacliinta sare
aadan boos waxbarasho oo lagu gaarayo shahaadada dugsiga tacliinta sare qaadan deyrti 2014 ama ka dib
Cadadda go’an ee dadka cusubFinnish | Iswidish | Ingiriis
Codsiga goonida ah
Jaamacadaha iyo dugsiyada xirfadda ee tacliinta sare qaarkood waxaa lagu codsan karaa codsiga wadajirka ah ama kan goonida ah. Codsiga goonida ah waxaa inta badan dalbada dadka horay u soo qaatay waxbarashooyin. Waxbarashooyinkaas waxay noqon karaan tusaale ahaan:
shahaadada koowaad ee dugsiga tacliinta sare
waxbarashooyin lagu soo qaatay dugsi kale oo tacliinta sare ah
waxbarashooyin lagu qaatay dugsiga tacliinta sare ee furan.
Codsiyada goonida ah waxaa inta badan loo qabanqaabiyaa tusaale ahaan:
barnaamijyada mastarka ah ee jaamacadda, kuwaas oo loogu talaggalay dadka haysta shahaado koowaad ee jaamacadda
waxbarashada ku baxda afafka qalaad
dadka codsanato waxbasho shahaadeed ku salaysan waxbarasho ay ku soo qaateen dugsiga tacliinta sare ee furan
Codsiyada goonida ah waxay noqon karaa wakhtiyo kala duwan, habab kala duwanna waa loo codsadaa. Adeegga Opintopolku.fi ayaad ka heleysaa codsiyada goonida ah.
Sii wadashada cilmiga
Haddaad rabto inaad ka sii siyaadsato cilmiga jaamacada, toos ula xiriir jaamacada.
Aqbalida booska waxbarashada
Haddii aad heshay boos waxbarasho, waxaa laguugu soo wargelinayaa iimaylka. Waxaa farriinta laguu sheegayaa, wakhtiga lagaa rabo in aad booska guddoonto. Waa muhiim in aad wakhti hore booska qaadato, haddii kale waad waynaysaa. Waa in aad sidoo kale ku wargelisaa dugsiga aad booska waxbarashada ka heshay. Farriinta waxaa ku qoran tilmaan-bixinno ku saabsan sida aad booska u aqbalayso iyo sida aad dugsiga ugu wargelinayso. Markaad aqbasho booskii waxbarashadana, waxaad ballan qaadeysaa inaad waxbarashada ka bilaabeyso iskuulkaas.
Haddii aad hesho boos waxbarasho, laakiin aadan doonayn in aad qaadato, ku wargeli in aadan booska qaadanayn. Waxaa markaas booska la siin karaa qofka ugu horreeya ee faylka sugitaanka ku jira.
Waxaad codsan kartaa xiliga dalbashada iskuullada iskuulo badan oo kala duwan. Waxaadna aqbali kartaa oo keliya hal iskuul.